Shily: Andron’ny Tanora Mpiady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2017 16:30 GMT
Nandritra ny vanim-potoanan'ny mpanao didy jadona tao Shily, nisy namono ireo mpirahalahy Rafael sy Eduardo Vergara. Niady tamin'ny governemanta izy ireo. Nanomboka tamin'izany, nisy ireo fikambanana sasany tany Shily nankalaza ny andron'ny “tanora mpiady”. Tsy fanambarana ofisialy ara-panjakana izany. Indrisy fa ho antsika, adino ny dikan'ny fankalazana mifandraika amin'ny ady amin'i Augusto Pinochet. Tamin'ny Alakamisy, tao afovoan'ny capitol, nanakorontana tamin'ny anarana “tanora mpiady” ireo mpianatra tanora. Nilaza ihany koa izy ireo fa handeha hanohitra ny tsy fahombiazan'ny rafi-pitaterana vaovao ao Santiago. Naneho hevitra avy hatrany ireo bilaogera. Solylunnyta [ES] namaritra ny zava-misy mampihetsi-po:
Iray amin'ireo fikambanana mankalaza ity daty ity ny Workers Collective [ES]. Nanao fanasana tena mampihetsi-po ho an'ny olona rehetra izay mety ho tafiditra tamin'ny fotoana namonoana ny Vergara Mirahalahy izy ireo mba handray anjara amin'ny hetsika fahatsiarovana. Adikanay eto ny sombiny tamin'ny fanasana:
Namoaka fanasana ho an'ireo mpikatroka ao Santiago sy sary sasantsasany momba izay nitranga omaly tao an-tanàn-dehibe i Eduardo Arriagada (ES).